Ka Atatürk ọdụ ụgbọ elu mepere Ọzọ maka njem ụgbọelu | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKa ụgbọ elu nke Atatürk mepee ọzọ maka njem ụgbọelu
Ka ụgbọ elu nke Atatürk mepee ọzọ maka njem ụgbọelu
11 / 02 / 2020 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ọdụ ụgbọ elu nke Ataturk mepere emepe maka ụgbọ elu ọzọ
N’ọdụ ụgbọ elu atọ dị na Istanbul, ndị ọkachamara nyochara nchekwa ụgbọ elu: “Sabiha Gökçen bụ ụzọ nke abụọ.” “Ọ ga-abụ ezigbo echiche ịgbanyụ ụgbọ elu Atatürk kpamkpam ma belata akwa ọla edo.”
Ihe ọghọm nke mere na 5 nke February na Sabiha Gökçen Airport mere ka nchegbu banyere nchekwa ụgbọ elu. Onyinyo nke ụgbọ elu Boeing 737 nke Pegasus, nke mere njem Izmir-Istanbul, enweghị ike iguzo n'okporo ụzọ ahụ wee daa n’ala siri ike, kpatara echiche dị iche iche na ọtụtụ ebubo. DW Turkish jụrụ ndị ọkachamara gbasara nchekwa ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu ụgbọ elu Istanbul.
Offọdụ ndị ọkachamara kesara echiche ha na DW Turkish wee kpọọ ma rịọ ka ha ghara ide aha ha. N'ihi na, n'oge a, onye nkuzi ụgbọ elu nke onye ọkwọ ụgbọ elu bụbu Bahadır Altan na Pegasus kwụsịrị. Altan bịarutere atụmatụ ya na mmemme telivishọn ọ sonyere na ekwentị mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, etinyere ya na mgbe a tụpụrụ ya n'ihi na ọ sịrị “Dị ka ụgbọ ala nke breeki”. Altan si twitter wee kwuo ahịrịokwu ndị a: “Ihe m na-ekwu kemgbe ọtụtụ afọ erutebeghị ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na ịmara nke a na - egbochi ihe ọghọm ma chebe ndụ mmadụ, aga m akwụ ụgwọ ụdị ụgwọ ugboro ugboro. ”
Gini mere uzo nke abụọ ahu adighi-aga?
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem Cahit Turhan kwuru ụbọchị abụọ tupu ihe mberede ahụ: “Anyị nwere okporo ụzọ na Sabiha Gökçen. Ike gwuru egwu a. A na-enye ụzọ okporo ụzọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'abalị niile n'oge awa na-enweghị ụgbọ elu. ” Okwu ndị a welitere ajụjụ banyere ihe kpatara nke abụọ n'okporo ụzọ awara awara adabeghị. Sözcü Dabere na akụkọ banyere akwụkwọ akụkọ banyere nke a, ndị mmekọ nke AKA Construction, guzobere ọnwa isii mgbe ọmịiko ahụ, na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul bụ otu: Kalyon Construction na Cengiz Holding. Thezọ a na-agba ọsọ, nke gbara mbọ ịrụzu n’ime ọnwa iri na anọ, emebeghị ka ọnwa anọ na anọ rute, emechara ụgbọelu Istanbul n’ime ọnwa iri anọ na itoolu.
So Sabiha Gökçen bụ kawai ọpụpụ ọsọ? Otu onye isi ụgbọ elu nwere ahụ ọfụma onye gafere ụlọ ọrụ nkeonwe mgbe ọ rụsịrị ọrụ na THY ruo ọtụtụ afọ ma na-enyezi ọzụzụ ụgbọ elu, depụtara adịghị ike nke ọdụ ụgbọ elu dị ka ndị a:
Ike gwụrụ iji ala; egwu a na - acha odo odo nke na - adighi nma igbochi taya ya ibido na ha. Nke a bụ nnukwu handicap na usoro nke ọdịda anya. Onye na-anya ụgbọelu ahụ, onye na-ekwu na ngwaọrụ ndị na-atụnye ikuku ezughị, na-arụpụta ajụjụ ahụ ma adịghị ike ndị a na-eweta ihe egwu ma ọ bụ na ọ bụghị, “E nwere ngwaọrụ ndị ga-enye ụkpụrụ kachasị dị ala, nke kacha nta” dị ka ndị a:
“A ga-ah or okwa nd i ah u zitere nd i ah u ur u uda ha ma nwee ihe omuma. A ga-enwerịrị ndị na-eburu igbe ozu. Achọrọ nkwado ọ bụla na ọdụ ụgbọ elu. A dịghị eme ya n'ekpere, iji ọkụ, onyinye. "
Ọdụ ụgbọelu na Turkey, ndị State Ụgbọelu Administration (sama), dabere na-eje ozi. N'aka nke ozo, Sabiha Gökçen gwara HEAŞ n'okpuru Ministri nke National Defence, dika ebidobere ya dika ulo oru ndi agha. Ndị isi ọdụ ụgbọ elu (INANASS), ndị anyị chọrọ inweta ozi gbasara nchekwa ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu, hapụrụ arịrịọ anyị maka ajụjụ ọnụ a na-aza.
"Onweghị ihe egwu ma ọ bụrụ na enwere ikike ụgbọ elu"
Abdullah Nergiz, onye ọkachamara n'ihe banyere ụgbọ elu na onye nchịkọta akụkọ nke ebe nrụọrụ weebụ ụgbọ elu 101, ekwenyeghị: "Anyị enweghị ike ikwu na ikike ịnya ụgbọ elu dị ize ndụ n'enweghị ozi."
Ọ gbakwụnyere na ọ nweghị onye ga-etinye ya n'ihe egwu, ebe ntakịrị ntakịrị ga-enwe nsonaazụ siri ike: “Kama ọ bụkwa eziokwu na a na-esochi egwu ahụ. N'ihi ya, ọ chọrọ mmezi. Ka o sina dị, mgbe emepere ụzọ nke abụọ, nke mbụ ga-emechi emechikwaa. Mgbe mbụ ọ bịara n'ihe a na-ekwu, ekwuru na ọ ga-akwụsị na 2012, mgbe ahụ ọ mere na 2017… Ọ ka nwuchabeghị. ”
Dịka a na-ahọrọghị ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ, Nergiz anaghị asọpụrụ echiche na enwere mkpokọ na Sabiha Gökçen na ya mere enwere ike imebi okporo ụzọ. Ọ na-ekwu na ụgbọ elu obodo agaghị agabiga ókè ndị ọchịchị ụwa kpebiri, ọ sịrị, "Nke a bụ mmegharị 40 kwa elekere. Sabiha Gökçen agafereghị ụdị nke a. ”
“Ilekọta apụtaghị nchekwa”
Onye isi ala Hava-Sen Seçkin Koçak kwuru na enweghị ihe egwu n'ihe banyere nchekwa ụgbọ elu. N'ikwu na ejiri egwu dị ukwuu, Koçak kwuru, “do na-eme njikwa gị ma imepee ụzọ ahụ ọzọ. Enwere ndị mmadụ na-abịanye aka na ọla edo mgbe azụmaahịa ọ bụla. Mustzọ nke abụọ ga-agwụ ngwa ngwa o kwere omume mana ọ pụtaghị na ọ baghị uru ilebara ya anya. ”
Sedat Cangül, odeakwụkwọ ukwu nke Hava-İş Union kwuru, "Anyị abụghị ndị na-enye nchekwa ụgbọ elu. Anyị na-arụ ọrụ na ikike ndị otu anyị. "
Airportgbọ elu ọhụrụ: thezọ nke okporo ụzọ adịghị mma?
Airportgbọ elu nke atọ, nke bụrịrị nnukwu esemokwu kemgbe usoro ọrụ a wee bido ọrụ ya na Mee 2019, Ebe a na-akpọ Airportgbọelu Istanbul, nke aha ya bụ gọọmenti, na-akatọ maka nchekwa ụgbọ elu. Waysgba ọsọ na-etiti nkatọ na ịdọ aka ná ntị. Ndị ọkachamara, ndị na-ekwu na e wuru okporo ụzọ ndị ahụ n'ụzọ na-adịghị mma, na-echetara na ọtụtụ ụgbọ elu aghaghị ịgafe waysorlu ma ọ bụ Bursa n'agbanyeghị na oge adịghị mma.
Onye ọkwọ ụgbọelu na-enyocha nchekwa ụgbọ elu na ahụmịhe ya ihe karịrị afọ iri atọ kwuru na ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ a, nke ọ kpọrọ “ajọ ọnọdụ n'ọnọdụ ebe ọ dị”, enwetala ikuku na-emeghe na mgbago ugwu na iru mmiri nke Oké Osimiri Ojii ma gafee ókè nke okporo ụzọ ụgbọ elu nke ụzọ mkpebi ikpe ya ezighi ezi. Maka nke a, o kwuru na enwere ọtụtụ igwe ihe ikuku gbara ya gburugburu wee sị, "Nhọrọ ebe adịghị njọ. Ọ na-abụkarị okpukpu 3-5 na-atụ oyi ka atụnyere Istanbul; N’ebe enwere otutu ice na foogu. Ma agam aghaa nke a, ala nke ubara bu uko di iche. Ọdịdị nke ala ahụ dị mma maka ịmịkọrọ mmiri ma daa. Ọ sịrị, "Omume amalitelarị na ebe a na-adọba ụgbọala," ka o kwuru.
N'ịkọwa na ha chọrọ ka e debe ọdụ ụgbọ elu Atatürk ọbụlagodi otu oge okpomọkụ na oge oyi n'otu ogige ọhụrụ, onye ọkwọ ụgbọ ala kwuru, “Gịnị kpatara anyị ji emechie? Ọ ga-abụ square nke nwere egwu 3 ugbu a, nke anyị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị kwuru ọtụtụ ihe, mana anyị enweghị ike ige ntị. ”
“A na-ewuru ọdụ ụgbọ elu ebe ọ bụla, ọ bụrụhaala na emere ya ọfụma”
Ọkachamara nke ụgbọ elu Abdullah Nergiz anaghị echegbu onwe ya maka nhọrọ ebe ọ dị. Inye ihe atụ si Osaka, Hong Kong, South Korea ma cheta na enwere ọdụ ụgbọ elu etinyere n'ofe oke osimiri, kilomita ise n'akụkụ ụsọ mmiri, “Ọ nweghị ebe na-ezighi ezi. Teknụzụ e ji ewu ewu abụrụla nke ị nwere ike ime ebe ọ bụla. Naanị ihe ọ ga-efu. ” Dabere na Nergiz, onye na-ekwenyeghị na nkatọ banyere ikuku, ọ bụ ihe dị mma ịnwe ikuku na ọdịda ma wepu. Naanị otu ọnọdụ ị ga - esi ekpebi ikuku kachasị bụ ma mee ka ụzọ nke ụzọ ahụ si dị. Ọ sịrị, "Anyị enweghị ike ikwu ihe na-ezighi ezi, mana ụzọ ụzọ ndị ahụ dị mma."
“Anyị enweghị mkpọchi n'ọnụ ụzọ”
Onye isi ochichi nke Hava-Sen Seçkin Koçak, na-anabata na enwere ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ na-efu efu, nwere mmasị na-elekọta nke a:
“Enwere ohere ịpị igodo ahụ mgbe nnukwu ego tinyechara? Ọ dị m ka ya bụrụ na emeghị ya ebe ahụ, ọ ga-adị m ka ya bụrụ na anyị nwere ike ịbụ mba maara nke a, mana ọ bụghị. Sabiha Gökçen bụ akuku kwesịrị itolite, ọ dịkwa mkpa ịgbalị imeju ikike nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul n’enweghị isi ike dị ukwuu. Ọ dị ihe ndị a chọrọ iji mezuo ihe ndị ahụ merenụ. Ọ naghị anabata oge igbu oge. Otu nkeji nke mmanụ ọkụ pụtara ihe dị ka nde dollar kwa afọ. ”
Dabere na Koçak, onye kwuru na "portsgbọ elu abụọ ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ na ike kachasị", Istanbul ga-achọ ọdụ ụgbọ elu ọzọ afọ iri ka e mesịrị.
"Ọ ga-abụ ibelata akwa edo edo edo"
Koçak, Nergiz na ndị ọkwọ ụgbọ elu niile na -eche otu echiche ha na-atụ aro na a ga-emepegharị ụgbọ elu Ataturk maka ụgbọ elu ụgbọ elu. N’ikwu na enwere ike ibido ụgbọ elu ụgbọelu ọzọ na mpaghara ebe ejiburu ụgbọ elu, ogbugba ndu na ụgbọ elu, ndị ọkachamara na-echetara na enwere ọdụ ụgbọ elu n’etiti obodo na obodo mepere emepe dịka London, New York na Paris.
"Kpamkpam bipu ọlaedo ọgazị," kwuru Narcissus, ọ na-ekwu na Turkey bụ aku na uba na-na ọnọdụ na-eme ka ndị dị otú ahụ a bonkörlük. Partsfọdụ akụkụ nke ọdụ mba ofesi na-echetara na e mere ya n’afọ 2015 na afọ 2017, na-asị, “E nwere ọdụ ụgbọelu, enwere ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu nke ụgbọ ala, ndị njem abụọ na-ezu ike, anaghị egbu oge, na ọdụ ụgbọ elu abụọ ọzọ."
Mgbe a na-ahazi njikwa ikuku dị mma iji na-ebufe okporo ụzọ n'enweghị nsogbu, ndị ọkachamara na-ekwu na enwere ike iji ọdụ ụgbọ elu atọ kwuo, “Ọ na-ele mkpebi. Ekpebiela ya site na nkwekọrịta n'etiti DHMI na IGA. ”(Deutsche Welle Turkish)
3. Domestic Flights na Airport iji airspace Bulgaria, Turkey ...
Njikọ ụgbọ okporo ígwè na Sabiha Gökçen na ọdụ ụgbọ elu Atatürk
CHP Reserve: Atatürk Airport Land kwesịrị "Atatürk City Park"
3 Cheap Flights Izmir. Ihe eji eme njem n'ọdụ ụgbọ mmiri na-egbochi
Eritere ule ule! Akpa akpa na Istanbul New Airport
A na-emepe Ọdụm Siiri na Flight maka Ihe 2 Afọ
Anọgharị Mọnk Anwụrụ Anwụ Eshiki Yenikapi Ataturk Light Light Line Line Obi Ego Akpọghe
İmamoğlu: losgbachi ụgbọ elu nke Atatürk Kwesịrị Mkparịta ụka Ọzọ
Atatürk Fashion Show Project na ebe nchekwa nke Atatürk ịbata na İzmir na Basmane ụgbọ oloko
3 si DHMI Ataturk Airport. Mpịpị bọtịnụ ịkwaga n'ọdụ ụgbọ elu
Ataturk Airport, Best World 3. Achọpụtara Ọdụ Ụgbọelu
RayHaber Ozi Ntanye 11.02.2020